भर्खरै सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय हेर्नुहोस् निर्णय ? – Paluwa Khabar
भर्खरै सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो यस्ता महत्वपूर्ण निर्णय हेर्नुहोस् निर्णय ?
साउन १४, २०७८ बिहिबार 62
काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । सरकारले मंगलबार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्ने भएको हो ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकीकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई हटाएर पृथ्वीमान सिंह गुरुङलाई र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेको हो ।प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अर्कोतिर सरकारले प्रभुराम शर्मालाई कार्यवाहक प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शर्मालाई कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो ।शर्माले हाल सेनामा बलाध्यक्ष र बलाधिकृत रथीको जिम्मेवारी सम्हालिनु रहनु भएको थियो ।
हालका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २५ भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । अवकाशको एक महीना अघि विदा बस्ने परम्परा अनुरुप उहाँले २४ साउनबाट विदा बस्ने तयारी गर्नुभएको थियो । थापाको औपचारिक विदाइ भने २५ भदौमा हुनेछ ।
यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थविद् पौडेललाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
Prevएमाले एकता हुँदैन भन्नेलाई मुखभरीको जवाफ मिल्नेगरी माधव नेपालले गरिदिए यस्तो बोल्ड निर्णय, देशभरका नेताकार्यकर्ताहरुमा पलायो नयाँ आशा
Nextउच्च जो’ खिम बढेपछी भर्खरै सरकारले चाल्यो यस्तो कदम ,जनतामा छायो निराशा
एकाउन्टेन्टनै राखेर अपार्टमेन्टमा यौनधन्दा : ढोकामा अत्याधुनिक लक कोड, रेट पनि कती महङ्गो !
आज बिहान आएको भू’ कम्पले यति धेरै ठाउमा घर भ’ त्किँदा यति मानिसहरु को अवस्था ग’ म्भिर (हेर्नुहोस भिडियो)